Maraykanka oo dhaqan gelinaya Cunaqabateynta IRAN – Radio
Maraykanka oo dhaqan gelinaya Cunaqabateynta IRAN
November 5, 2018	73	Like
Maanta oo ku beegan 5ta bisha November ayey dowlada Maraykanka bilaabeysaa dhaqan-gelinta cunaqabateynta dhaqaale oo ay kusoo rogeen wadanka Iran.
Cunaqabateyntan oo daba-socota burburintii Maraykanka ku sameeyey heshiiskii Nukliyeerka Iran ee la saxiixay 2015, heshiiskaasi oo ay weli taageersan yihiin Beesha Caalamka iyo Qaramada Midoobay.
Maraykanka ayaa kaligiis go’aansaday inuu ka baxo heshiiskaasi oo ay qeyb ka ahayd qaadista cunaqabateynta dhaqaale ee saaran xukuumada Tehran.
Xukuumada Trump ayaa dooneysa inay cadaadis dhaqaale saarto Xukuumada Iran, si khal khal siyaasadeed iyo kacdoon shacab looga abuuro gudaha wadanka Iran, waxayna sheegeen inay gorgortan la geli doonaan Dowlada Iran hadii ay joojiso dhaq dhaqaaqa ay ka wado Bariga dhexe iyo waxa ay ugu yeereen maalgelinta kooxaha argagaxisada.
Dalalka Sacuudiga, Imaaraatiga iyo Israel oo xiriir fiican laleh Xukuumada Trump ayaa muddo dheer olole ugu jiray burburintii heshiiskii lala galay Iran, isla markaana si weyn u taageersan cunaqabateyntan.
Xayiraada ugu weyn ayaa lagu soo rogay wax soo saarka batroolka Iran, wuxuuna Maraykanka ku goodiyey inuu xayiraad saari doono shirkada ama dalka ganacsiga dhanka Batroolka la sameeya Iran, waxayse si gaar ah uga reebeen 8 wadan oo ay sheegeen inay sii wadan karaan ganacsiga ay Iran la leeyihiin ee shidaalka, waxaana kamid ah dalalka China, Ruushka, Koonfurta Kuuriya, India iyo Turkiga oo iyagu horey u sheegay inaysan joojin doonin shidaalka ay kasoo gataan Iran.
Cunaqabateynta ayaa sidoo kale la saaray shirkadaha waaweyn ee qalabka sameeya ee uu leeyahay dalka Iran, Bangiga dhexe ee Tehran, shirkadaha Maraakiibta iyo dekkadaha wadankaasi.
Axadii shalay ayey kumanaan kun oo shacab ah banaanbax looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israel ku qabteen caasimada Iran ee Tehran, waxayna shacabkaasi sheegeen in ololaha uu wado Maraykanka ee ka dhanka ah dalkooda uu sii-mideyn doono shacabka reer Iran.
January 20, 2019	167	1
January 20, 2019	103	Like
August 6, 2017	668	Like
August 6, 2017	431	Like
December 29, 2018	126	Like
November 22, 2018	115	1
August 6, 2017	381	Like
August 6, 2017	415	1
AXMED MADOOBE OO GUDOOMIYAY SHIRKA GOLAHA AMNIGA HEER DOWLAD GOBOLEED
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Isniinta maanta ah shir gudoomiyay shirka ...